iPhone X အား မန္တလေး တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Channel Pyae Lay
#ZP / A အလုံးလေးမှကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်
《 Apple 》လေးတွေ ပါရှင် !!!
Official ... Warranry ကျတဲ့ Official လေးတွေပါ။
#iPhone X 《 Silver...256GB》
#iPhone X 《 Gray ....64GB》
CHANNEL 9.9 73 × လမ်း 39 × 40 ကြား
iPhone X《 Silver 》 256 GB
Officialအလုံးသန့် --- NAKZ Warranry ကျံ
《Face Lock ... good》
《Portrait ... အဖိုင်း》
iPhone X《 Space Gray 》 64 GB
လဲသည် --- ရောင်းသည် --- ဝယ်သည် ။
---- နယ်အာမခံ 15 ရက်ပေးပါတယ်
CHANNEL 9.9 အာမခံဖုန်းရောင်းဝယ်ရေး
မန္တလေးမြို့ !!!! 《 09444681010 》
《 09444681212 》
အမည်: iPhone X